About Anyị - Linqing Xinri nkenke Iburu Co., ltd.
Linqing Xinri nkenke Iburu Co., ltd.
LINQING XINRI PRIISION bear CO., LTD bụ ezinụlọ pụrụ iche na-amị emeputa kemgbe afọ 2006. Nkà ihe ọmụma anyị: nweta ntụkwasị obi site na ịkwụwa aka ọtọ, merie site na ịdị mma, mepee site na ihe ọhụrụ, ma mee ohere nke anyị site na mmụọ na-enweghị atụ.
Njirimara ndị a enyerela anyị aka nke ọma, na-enweta XRL aha siri ike n'etiti ndị mmekọ na-eguzosi ike n'ihe na ndị ahịa. N'ihi ya, XRL CO., Nwere ntọala siri ike ma na-eto ngwa ngwa na ntanetị na nkesa, ma n'ime ụlọ ma na mba ụwa.
Site na ahia ahia kwa afọ nke ihe karịrị US $ 150 nde na ikike ụlọ kwa afọ nke ihe karịrị nde 7000, na akụrụngwa na-agwakọta ihe karịrị 2 nde ụkwụ abụọ, XRL bụ otu n'ime ndị na-emepụta ihe kachasị mkpa n'ụwa. N'ezie, XRL ereworị na ihe karịrị mba 120 gburugburu ụwa. Ma maka ọrụ ugbo, imepụta textile, nsị, ibipụta ngwa dị iche iche na ọdụ ụgbọelu, na sistemụ ikuku, nnyefe ngwaọrụ, ọdụ ụgbọ mmiri, ihe egwuregwu ụmụaka ma ọ bụ maka ngwa ahụike, Medicalgbọala, XRL na-anọchite anya ihe kacha ala ahịa ahịa kacha elu. . Ka ọ dị ugbu a, a na-ahụkwa XRL maka ọkwa kachasị elu, nzaghachi, ọrụ 24/7/365 - a na-aza ozi ịntanetị na ozi olu ọ bụla n'ime awa isii, ekwela nkwa!
Ezigbo ọrụ ire ahịa: (ọnwa iri na abụọ dị mma, enwere ike iwepụ ma ọ bụ kwụghachi ego ma ọ bụrụ na nsogbu ọ bụla dị n'okpuru ọnọdụ iji ya).
OEM / ngwaahia ọrụ na-anabata.
7X24 awa ekwentị ma ọ bụ nkwado teknụzụ n'ịntanetị n'efu.
(1) Anyị nwere klas nke mbụ na-anwale akụrụngwa iji chọpụta ọnụọgụ data dị iche iche na-ejikwa njikwa agba.
Mgbe ọ bụla biarin ga-mbụ achọpụtara ma àgwà ruru eru na-erughị eru amị ga-ewepụ ozugbo.
Ya mere, anyị nwere ike ịnweta ntụkwasị obi nke onye ahịa buru ibu, ma nye ha ọtụtụ afọ.
(2) Anyị nwere ikike R & D nke anyị, iji nyere ndị ahịa aka idozi nsogbu nke biarin ọkọlọtọ.
Anyị nwekwara ike dị ka ndị ahịa chọrọ ịgbanwe akara ha.
(3) price, anyị rụpụta hụ na anyị ahịa gafee China bụ nnọọ asọmpi.
Ọ kaara gị mma iji ọnụahịa na mma dị n'etiti ndị na-eweta ngwaahịa.
Mana onye ọ bụla maara na ị nweghị ike ịzụta ngwaahịa kachasị elu yana ọnụahịa dị ala,
ma anyị ngwaahịa bụ ihe kasị mma mma ma ọ bụrụ na ị na-eji nha price.
(4) Ogo nke XRL na-ebu: dị elu karịa ọkọlọtọ ISO: 9001 na Gost.
Nkwupụta na-abịa ebe a
Ndị ahịa mbụ.
Bebụ onye Otu ika na zuru ụwa ọnụ agba Mmeputa
Mee ụlọ ọrụ a ma ama n'ụwa ma mepụta akara ngosi kachasị mma nke China
Na-ekwusi ike na-agba ume mgbe niile
2. Dị ka onye na-emepụta ISO9001: 2000 kwadoro ụlọ ọrụ, anyị guzobere usoro nyocha ngwaahịa. E wezụga nke ahụ, XRL Co., nwere ndị ọrụ teknụzụ siri ike na injinia Japan iji dozie nsogbu dị iche iche na ntinye na ojiji nke biarin anyị.
Anyị na-enye a nso nke biarin gụnyere Tapered ala biarin, miri uzo bọl biarin, ohiri isi ngọngọ biarin, cylindrical ala biarin, Spherical ala biarin, * Tụkwasị agba biarin, wheel ehihie biarin na ndị ọzọ.
1. Anyị nwere klas mbụ na-anwale akụrụngwa iji chọpụta na-ebu data dịgasị iche iche ma jikwaa àgwà nke agba.
2. Anyị nwere ikike R & D nke anyị, iji nyere ndị ahịa aka idozi nsogbu nke biarin ọkọlọtọ.